थाहा पाईराख्नुस् : “लकडाउन” को बेला के गर्ने, के नगर्ने ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
थाहा पाईराख्नुस् : “लकडाउन” को बेला के गर्ने, के नगर्ने ?
विश्वब्यापी बनेको कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने चैत १८ गतेसम्मका लागि “लकडाउन” गरेको छ ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको निर्णय गरेको हो ।
लकडाउनमा के–के गर्न मिल्दैन त ? :
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०७६, सोमबार २०:४७